Zvapupu zvaJehovha Zvinobatsira Sei Kuti Dzimba Dzazvo dzoUmambo Dzirambe Dzakanaka
Imba yoUmambo imwe neimwe yeZvapupu zvaJehovha ine zita dzvene raMwari. Nokudaro, kuchengeta chivako chedu chakachena uye chichitarisika zvakanaka tinozviona seropafadzo uye chikamu chinokosha chokunamata kwedu kutsvene. Munhu wose ane zvaanogonawo kuita.
Zvipire kuita basa rokuchenesa panopera misangano. Panopera musangano mumwe nomumwe, hama nehanzvadzi dzine zvishoma zvadzinoita pakuchenesa Imba yoUmambo kuti itarisike zvakanaka. Kamwe chete pavhiki, pane zvakati wandei zvinoitwa pakuchenesa. Mukuru kana kuti mushumiri anoshumira ndiye anoona nezvekuitwa kwebasa racho, kazhinji achitevedzera zvinenge zvakanyorwa zvinofanira kuitwa. Zvichienderana nokuti chii chinenge chichida kuitwa, vanhu vanozvipira kutsvaira, kukorobha, kupukuta guruva, kuchenesa uye kuisa mishonga muzvimbudzi, kugeza mahwindo, kurasa marara, kana kuti kuchenesa kunze uye kugadzira pachivanze. Pagore panosarudzwa zuva rimwe chete kana anopfuura okunyatsochenesa. Tikashandawo nevana vedu pakuita mamwe emabasa aya, tinovadzidzisa kuremekedza nzvimbo yedu yokunamatira.—Muparidzi 5:1.
Zvipire kubatsira pakugadzirisa chero kupi kunoda kuitwa. Gore rimwe nerimwe, Imba yoUmambo inonyatsoongororwa mukati nokunze. Kubva pane zvinenge zvaonekwa pakuongorora uku, nguva nenguva basa rokugadzirisa rinoitwa kuti chivako chacho chigare chakanaka, zvichiita kuti mari ichengetedzwe. (2 Makoronike 24:13; 34:10) Imba yoUmambo yakachena uye inotarisirwa zvakanaka inzvimbo yakakodzera yokunamatira Mwari wedu. Nokuitawo basa iri, tinoratidza kuda kwatinoita Jehovha uye kukoshesa kwatinoita nzvimbo yedu yokunamatira. (Pisarema 122:1) Izvi zvinoitawo kuti tionekwe zvakanaka munharaunda.—2 VaKorinde 6:3.
Nei tisingafaniri kuregeredza nzvimbo yedu yokunamatira?
Urongwa hupi hunoitwa kuti Imba yoUmambo igare yakachena?